Muuqaallo – Calan Qaran
November 6, 2016 at 1:04 pm	0 comments
Ibrahim Ali Rageh, 35yrs of age was wounded by unknown men armed with pistols, he is not affiliated with any political or religion party, he doesn’t work with any local or international agency, but he is only a simple person who earns his living through his strength. Two rounds whichRead More
Farqiga Xasan Sheekh iyo Siyaad Barre oo tusaale u ah Wadaniyadda Soomaalida
September 24, 2016 at 4:53 pm	0 comments
M/weynihii ugu xukunka dheeraa Somalia ee xukuumaddii militariga Jaalle Maxamed Siyaad Barre wuxuu sanadkii 1971-kii jeediyay khudbad uu kaga hadlay dhulka Soomaali Galbeed iyo NFD ee ku maqan Itoobiya iyo Kenya. 6-sano ka hor intuusan qarxin dagaalkii 1977 ee Itoobiya iyo Somalia wuxuu M/weyne Siyaad ku baaqay in wada hadalRead More
Sheekh Shariif oo dareen cusub ka abuuray Caasimadda Somalia ee Muqdisho
September 23, 2016 at 1:28 pm	0 comments
M/weynihii hore ee Somalia Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shalay gaaray magaalada Muqdisho ayaa si’ weyn loo soo dhaweeyey, wuxuuna u mahad naqay dadkii cadceedda u taagnaa intii uu diyaaradda soo saarnaa. Boqollaal dadweyne ah oo buux dhaafiyay garoonka diyaaradaha, laamiyada Muqdisho, iyo afaafka hore ee hoyga uu ka degayRead More
“Hal mitir oo biyaheenna ka mid ah diyaar uma nihin inaan ka tanaasulno” Madaxweyne Xasan
September 19, 2016 at 1:07 pm	0 comments
Madaxweynaha Qaranka Soomaaliyeed Prof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muuqaal uu ku faafiyay baraha bulshada wuxuu ku difaacay badda Somalia. Madaxweyne Maxamuud ayaa sheegay in labada dal ay isku fahmi waayeen, wada hadal qasabna ay noqotay in qaanuunka caalamiga ah iyo xeerarka Caalamka lagu kala baxo. “Aad ayaan kalsooni badan uguRead More
Maxamed C/llahi wuxuu tan iyo 2014 saaran yahay sariir..!
August 19, 2016 at 5:34 pm	0 comments
Maxamed C/llahi Muxumed waa wiil Soomaliyeed oo tan iyo 2014 ku dhibaateysan magaalada Muqdisho kadib dhaawac ka soo gaaray rasaas lagu furay gaadhi uu saarnaa xilli uu ku sii jeeday hooyadiis oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wareysi Calan Qaran uu siiyay ayuu Maxamed kaga warramay dhibaatadaRead More
August 18, 2016 at 5:14 pm	0 comments
Xuseen Maxamed Cabdulle waa walaal Soomaaliyeed oo 2-muuqaal oo ku saabsan uu Calan Qaran sii baahiyay, waxaana daawatay Soomaali badan oo u soo doceeyey inuu ilaahay caafiyo, qaar lacag u soo diray iyo qaar muuqaalkiisa share gareeyey si’ walaalaha kale u saacidaan. Xuseeen waa nin da’ dhexaad ah, wuxuu nooRead More
Hooyo Salaado oo deeq la gaarsiiyay maanta
August 16, 2016 at 4:11 pm	0 comments
Salaado Maxamuud Axmed wa hooyo Soomaaliyeed oo uu hayo cudurka kansarka, waxay xanuunsaneysay labadii sano ee u dambeeyey, waxaana ehelkeeda ay geeyeen cisbitaallo kala duwan oo ku yaal Muqdisho, waxaase dhaqaatiirtu isku raaceen inaan dalka waxba loogama qaban Karin. Warbaahin Online ah oo lagu magacaabo Calan Qaran ayaa gurmad ayRead More
Walaac laga qabo Masiirka Somalia
August 15, 2016 at 9:33 am	0 comments
Aqoonyahanno iyo Siyaasiyiin wadaniyiin ah oo ka danqanaya xaaladda uu ku sugan yahay dalkeenna Soomaaliya ayaa shir ay isugu yimaadeen waxay ku soo bandhigeen xaaladda halista ah ee ku geedaaman qaranka Soomaaliyeed. Duqii hore ee Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo ka mid ahaa indheer garadkii madasha ka hadlay wuxuuRead More
August 12, 2016 at 6:51 pm	0 comments
U hiilli hooyo Salaado, ku daawo qalbi naxariis badan, u docee oo ilaahay u bari inuu caafimaadkeedi u soo celiyo kana dulqaado xanuunkan. Hadii aadan awoodin inaad jeebkaaga wax ka siiso faldna haka bakheylin inaad share gareyso faafiso muuqaalkeeda si walaal kale oo wax heysta u caawiyo. waxay degantahay meelRead More